Isifo se-Celiac (infantilism emathunjini, idiopathic steatorrhea, noma i-gluten enteropathy) yisifo esingelapheki se-polysyndrome pathology esizibonakalisa njengesilonda esingenasiphakamiso se-mucosa emathumbu emathumbu okuholela ekutheni ukungabi namavithamini amancane kanye nezakhi.
Izimbangela zalesi sifo
Enhliziyweni yesifo se-celiac kukhona izinguquko ze-immunopathological emzimbeni ovela lapho evezwa ngaphandle, izakhi zofuzo noma izici zokuzivikela.
Indima ehola ekuthuthukiseni lesi sifo iwukwe-gliadin. Kuyinto amaprotheni etholakala ezitsheni (ukolweni, oats, ibhali, rye). Kukhona nengqondo yokuthi isifo se-celiac ezinganeni singenzeka ngaphansi kwethonya lamagciwane. Ngakho-ke, kwezinye iziguli i-titer ephakeme ye-antibodies kuya ku-adenovirus uhlobo lwe-12 itholakala ekuhlolweni, kodwa kufanele kuqashelwe ukuthi i-etiology ye-viral yesifo inezinhlamvu zesibili. Uma ulandela ukudla ngaphandle kwemikhiqizo equkethe i-gliadin, inani lama-antibodies kuma-adenovirus liyancipha ngisho nangaphandle kokutheleleka kwe-antiviral ethize.
Kumele ngithi ngisho nemali encane ye gluten ingabangela ukuvuselelwa kwesimiso somzimba sokuzivikela komzimba futhi ivuse izinguquko zokuvuvukala emathunjini. Ngaphezu kwalokho, ngeshwa ngeke ukwazi ukuqeda ngokuphelele isifo se-celiac, kodwa ngokudla okuqinile ngaphandle kwemikhiqizo yokudla, izimpawu zesifo aziveli.
Uma sikhuluma ngendlela yokuzalwa kwalesi sifo, khona-ke ku-pathogenesis yalesi sifo kukhona uhlobo oluyinhloko lwefa eligcwele ukungena okuphelele.
Isifo se-Celiac ezinganeni: izibonakaliso eziyisisekelo zemitholampilo
Lesi sifo singenzeka ngokungafani noma sibonakalise njengezimpawu ezingekho emthethweni ezingezona izici zokuvuvukala emathunjini. Lapho usemncane, lesi sifo sivame ukuboniswa emva kokwethulwa kokudla okuhambisanayo okuqukethe gluten (porridge, amabhisikidi).
Isifo se-Celiac ezinganeni sibonakala ngezibonakaliso ezilandelayo zemitholampilo:
• uhudo olude (uhudo);
• ukuqothulwa, okunye okuhambisana nesitokisi esivulekile;
• ukwehlisa isisu nokuhlunguphazwa esiswini ngemuva kokwandiswa kwegesi emathunjini ;
• ingane ingenasiphelo, ikhale njalo;
• ukuphindaphinda njalo noma ukuhlanza;
• isifiso esingenampofu kanye nokuthola isisindo esanele, kubhalwa ukudla okuphelele;
• Njengoba ukungenisa izakhi kanye namavithamini kungaphumeleli emathunjini amancane, isifo se-celiac ezinganeni singabonakalisa njenge-hypo- or avitaminosis, kanye ne-anemia;
• ukuziphatha kwezinguquko zezingane ezigulayo - ziba buthakathaka, ziphumule futhi zithukuthele, zenqaba ukudlala.
Isifo se-Celiac kubantu abadala sibhekene nokunye okwezinye izifo ezihlobene nokuphulwa kwesimiso somzimba sokuzivikela, kubonakala sengathi ukwephulwa kokugaya, i-anemia, i-osteoporosis, ukuhluleka kwe-hormonal. Ukuthola lesi sifo, ukuhlolwa kwe-immunological kanye nezakhi zofuzo kwenziwa. Lapho isifo se-celiac siqala, ukuxilongwa kwalesi sifo kufanele kubandakanye ukuhlaziywa kwakhe ngokwemvelo kwe-intanethi yamathumbu amancane.
Kumele kuthiwa kwanele ukuba iziguli zihambisane nokudla okungekho gluten ukuze kuthuthukiswe isimo sabo. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukulungisa ukungabi namaminerali okwevithamini-mineral, ukubeka amalungiselelo e-enzyme yokugaya okungcono, kanye nemithi esiza ukubuyisela imifino evamile yamathumbu.
Ingabe i-laryngitis enesifo esithathelwanayo noma cha?
Lodonga Modern for ophahleni
Izimpawu zesifo nokuphathwa kwe-torticollis enganeni esanda kuzalwa
Aphumule Belarus - enye kwamanye amazwe